Nkwupụta nke TOP 300 Site na Ndị Na - edeghị aha maka 2020 - Quotes Pedia
367 ruturu na okwu
Ndụ enweghị atụ. Never maghị ihe na-eme oge na-esote. N'ụdị ọnọdụ a, anyị na-achọkarị ihe ndị bara uru na ndụ anyị.
Mgbe ụfọdụ, anyị nwere nkụda mmụọ na nkụda mmụọ. Obere ihe mkpali nwere ike ịme ebube mgbe nile n’ụdị ọnọdụ ahụ. N'ihi ya, Ndi ode akwukwo amaghi ama nọ mgbe niile iji nye gị obere agbamume na agbamume a ka ike wee ghara ịda mbà ma ọ bụ nwee nkụda mmụọ site na ohere ọ bụla.
Isi ihe mere ndị edemede a ji chepụta idepụta echiche ha abụghị maka aha ọ bụla ma ọ bụ aha na ama ama ọ bụla, kama ha na-eme ya naanị maka iji nye gị ụfọdụ ụda ọma ma mekwa eme nke ọma. weputa onwe-gi site na ihe ojoo ma nweta ume ime ihe ohuru na ihe okike nke aka gi.
ndị a Kwuru site na amaghi kwuo okwu mgbe niile gbasara ịgbasa ịhụnanya gburugburu onwe gị. Lovehụnanya bụ ezigbo ume nke nwere ike ịkpụzi ihe ọjọọ ọbụla dị nsọ.
Ofwa a jupụtara n'ịkpọasị na ihe mgbu. Lovehụnanya nwere ike ịgwọ ọrịa iji wezuga echiche niile na - adịghị mma nke mmadụ ọ bụla ma mee ka onye ahụ nwee ike ịmegharị ihe dị mma na ihe ọhụrụ.
Ọ bụrụ n’ezie ịchọrọ ịgbanwe mmadụ ma wepụta ezi mkpụrụ obi n’ime ya, ikekwe nke ahụ nwụrụ n’ime afọ ahụ azụ, naanị ihe ị ga - eme bụ ịhụ onye ahụ n’anya n’enweghị nsogbu.
Hụnanya nwere ike dị ukwuu ịgwọ onye ọ bụla, ọ bụkwa mmụọ ahụ nwere ike ịgbanwe ebumnuche na ebumnuche onye ọ bụla. Anyị na-achọkarị fufu, ma ịhụnanya bụ naanị ike nke nwere ike ime ka ị laghachi n'ụzọ gị ọzọ.
ndị a ndi ode akwukwo amaghi ama nọ ebe a jiri ezigbo edemede kwalite gị, kụziere gị ihe ịhụnanya na mmụọ nsọ bara, ma nyere gị aka ibilite ọzọ ọbụlagodi mgbe ị dara otu narị ugboro. Never maghị ma oge nke 101 a ga-abụ ọfụma gị!
Nọgide na-enwe nchekwube ma nọgide na-ekwere. Ihe ka nma n’iru. - Amaghi ama
Aheadga n’ihu n’oge nsogbu nwere ike bụrụ ihe ịma aka mana ndị nwere ike imeri ụjọ ha na…
Anyị niile bụ otu, mana anyị enweghị atụ. Anyị niile nwere ihe dị iche na nke…
Iche echiche nke oma n’ihe nile gha enye gi ndu obi uto. - Amaghi ama
Nchekwube na-eme ka anyị na-aga. Ọ na-enye anyị ume ịchere anya n’oge ọbụladị nsogbu. Na…
Atụkwasịkwala ndị ọzọ obi. - Amaghi ama
Na ndụ, anyị na-abịa naanị anyị, naanị anyị. Ka ndụ na-aga n’ihu, anyị na-eme ọtụtụ mmekọrịta. Ọtụtụ n'ime ha…
Gụta ngọzi gị, ọ bụghị nsogbu. - Amaghi ama
Ndụ, ndụ dị mkpa ọtụtụ. Ọ bụ echiche anyị na omume anyị na-akọwa onye anyị bụ. Omume anyi…
Nọgide na-amụmụ ọnụ ọchị na otu ụbọchị ndụ ga-agwụ ike nke ịkpasu gị iwe. - Amaghi ama
Ka anyị na-azọ ndụ, ọ bụ ihe a na-apụghị izere ezere na anyị ga-eche ihu oge ọma yana oge ọjọọ…
Okwu adabaghị na emeghị ihe ọ bụla. Anyị nwere ike ịnọdụ ma chee maka ihe dị iche iche anyị chọrọ…
Adana mba. Nnukwu ihe na-ewe oge. Nwee ndidi. - Amaghi ama
Na ndu, inwere ike iche ọnọdụ dị iche iche mgbe ị ga - enwe mmetụta ịhapụ ihe. Onye tozuru oke ma mara ihe…
Ihe ụfọdụ na-ewe oge. Nwee ndidi ma nwee nchekwube, ihe ga-aka mma. - Amaghi ama
Ọ na-ekwu na mmiri na-egbutu okwute abụghị maka ike ya, kama n'ihi…
Ndụ ka mma site na ezigbo ndị enyi. - Amaghi ama
Ndụ ka mma site na ezigbo ndị enyi, ọ bụ eziokwu! Agbanyeghị na anyị nwere ọtụtụ mmadụ gbara anyị gburugburu, ma…
Na ndụ, ọgụ kachasị gị mkpa ịlụ bụ na ọ nweghị onye ọzọ karịa onwe gị. Ọ bụ…
Na-ebili kwa ụbọchị ma na-enwe ekele maka ndụ. - Amaghi ama
Nwee ndidi. Ezi ihe na-ewe oge. - Amaghi ama
Enyela ndị ọzọ ikike imebi ụbọchị gị. - Amaghi ama
Ndụ dị oke ọnụ ahịa. Ndị mmadụ nọ na ndụ anyị bụ ndị pụrụ iche mana na usoro mmepe mmekọrịta,…
Àgwà ziri ezi na-enyere gị aka idozi ọdịiche dị n'etiti ikike na ọchịchọ. - Amaghi ama
A gọziri anyị niile ike na onyinye dị iche iche. Ka anyị na-etolite, a na-ekpughere anyị…
Onye maara ihe maara ihe ọ ga-ekwu. Onye maara ihe ma ka okwuru ya. - Amaghi ama
Onye ma ihe bụ onye maara ihe ọ ga-ekwu n’okpuru ọnọdụ ọ bụla. Ahụmịhe nke o nwere…
Mgbe ndụ ga-enye gị narị ihe mgbakasị ị ga-eji kwatuo ma kwaa ákwá, gosi ndụ na ị nwere otu puku ihe mere ị ga-eji chịa ọchị ma chịa ọchị. Kwụsie ike. - Amaghi ama
Ndụ adịtụghị mma. I nwere ọtụtụ ihe kpatara ị ga-eji kwatuo, obi mgbawa na ịkwa ákwá. Agbanyeghị,…
Ndụ dị egwu na nke ahụ bụ eziokwu. Anyị anaghị achọpụta uru ihe ụfọdụ bara rue ma ọ gwụkwala…
Jiri ekele kelee kwa ụbọchị. - Amaghi ama
Jiri obi uto bido ubochi obula ma nke a gha eme ka mmuo gi elu ka can
Kwụsị ịchọ ka ihe mee wee mee ka ọ mee. - Amaghi ama
Mụ mmadụ nwere oke agụụ na ụwa, ha dịkwa umengwụ. Anyị niile chọrọ nke ọma na…
Jiri anya gi kpuchie nrọ gi, ma jiri anya gi kpuchie anya gi. - Amaghi ama
Nrọ bu otu ihe di nkpa n’ime ndu anyi. Ọ bụrụ na mmadụ adịghị arọ nrọ, onye ahụ nwere ezigbo…
Ndụ ga-ama mma mgbe ị mụtara imere onwe gị ihe dịkwa ka gị na ndị ọzọ. - Amaghi ama
Lovehụ onwe gị n'anya bụ ihe dị oke mkpa ma anyị na-eleghara ya anya n'etiti ịnọgide na-enwe mmekọrịta dị iche iche…
Atụla egwu ọdịda. Mụta ihe na ya ma na-aga. Istnọgidesi ike n'ihe bụ ihe na-eweta ịdị mma. - Amaghi ama
Ọdịda bụ ntọala nke ihe ịga nke ọma. N’enweghị ọdịda, ọ ga-esiri gị ike ịnụ ụtọ uto…
Ilegbachi ntị ka mma karịa ihe nkiri na-enweghị isi. - Amaghi ama
Ahụmahụ dị iche iche na-akpalite anyị n'ụzọ dị iche. Mana anyị niile ga-amụta imeghachi omume n'ụzọ kwesịrị ekwesị n'ọnọdụ dị iche iche ka…
Mma ịghaghị etu i siri chọọ, kama ọ bụ n'ụzọ i si akpa agwa…